पाेर्नस्टार सन्नी अनुपसँगै नेपाली फिल्ममा ! — samadhannews.com
पाेर्नस्टार सन्नी अनुपसँगै नेपाली फिल्ममा !
काठमाडौं, ७ भाद्र:
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले अभिनेता अनुपविक्रम शाहीसँग स्क्रिन सेयर गरेर नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’ खेल्ने भएकी छन्।
बेलायतमा हुने सुटिङ हुने फिल्मलाई सम्राट बस्नेतले निर्देशन गर्ने भएका छन्। आफूले पासवर्डमा सन्नी लियोनीसँग स्क्रिन सेयर गर्न लागेको शाहीले भने।
‘कति रूपैयाँमा सन्नी अनुबन्ध भएकी हुन् यसबारे मलाई थाहा छैन तर उनी नेपाली फिल्म खेल्न तयार भएकी छन्,’ शाहीले भने। स्रोतका अनुसार १ करोडभन्दा बढी भारतीय रूपैयाँ लिएर सन्नीले नेपाली फिल्म खेल्न लागेकी हुन्। आगामी अगस्ट २६ बाट फ्लोरमा जाने फिल्मको लागि सन्नी र अनुप लण्डन जाने भएका छन् ।
छायाँकार तथा प्राविधिकसहितको टोली यसअघि नै नेपालबाट बेलायत पुगिसकेको छ। फिल्मलाई विक्रम जोशीले निर्माण गर्न लागेका हुन्। विक्रम फिल्ममा अनुप र सन्नीसँगै लिड अभिनयमा रहनेछन् । सन्नीको आवागमनले नेपाली फिल्मलाई नयाँ उचाइ दिने भन्दै शाहीले नेपाली र बलिउड कलाकारको फ्यूजन जोड्नको लागि नै सन्नीलाई लिएको बताए।
अमित बस्नेत र हिरल जोशीको समेत लगानी रहने फिल्ममा छुल्ठिम गुरुङ, वुद्धि तामाङ, विक्रान्त बस्नेत, रवीन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, लिशा सुनार, परि राना लगायत लिड अभिनयमा हुनेछन्। लण्डनसँगै बर्नमाउथ र ससेक्स लगायतका ठाउँमा फिल्म खिचिने बताइएको छ। २०१९ को सुरुवातीमा रिलिज मिति लक्षित गरी बनाइने फिल्ममा सन्नीले एक आइटम दृश्य दिने छिन् भने केही भाग अभिनयमा पनि हुनेछिन् ।
एबी इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्ने फिल्मलााई सौरभ लामाले खिच्नेछन्। सस्पेन्स थ्रिलर तथा एक्सन लभस्टोरीको आसपास फिल्म हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ।